डीसीने अवार्ड मनोनयन, मनोनयनमा फिल्मकर्मीको असन्तुष्टि (मनोनयन लिस्ट सहित) – Mero Film
डीसीने अवार्ड मनोनयन, मनोनयनमा फिल्मकर्मीको असन्तुष्टि (मनोनयन लिस्ट सहित)
२०७५ वैशाख २८ गते ८:४६
‘सुतेको मान्छेलाई उठाउन सकिन्छ तर सुतेको अभिनय गर्नेलाई उठाउन गाह्रो हुन्छ ।’
नेपाली जनमानसमा थेत्तरो मान्छेलाई कुरा बुझाउन नसकिने सन्दर्भमा माथिको भनाइ प्रयोग गर्ने गरिन्छ । अनि नेपालमा चाँही अवार्डको मामलामा । सन्चारमाध्यमले बारम्बार अवार्डको निष्पक्षताका लागि आयोजकलाई आग्रह गरिरहन्छन् तर आयोजक कानमा तेल हालेर बस्छन् । फलतः नेपालका फिल्म अवार्डले स्रष्टाको सम्मान गर्दैनन्, स्रष्टाको मानमर्दन गर्छन् अनि यसको सुरुवात हुन्छ अवार्डको मनोनयनबाट ।
केही दिनअघि एनएफडिसी अवार्ड वितरण भयो । सो अवार्ड वितरण सर्जकलाई त चित्त बुझेन नै प्रकृतिलाई पनि चित्त बुझेन । पानीले अवार्ड बिथोलियो । अनि यसमा विजेता बनेका सर्जकमा पनि धेरैको गुनासो थियो । मंगलबार डीसिने अवार्डको मनोनयन सार्वजनिक भयो तर यो अवार्डले पनि अघिल्लो अवार्डको विवादबाट सच्चिने जुक्ति गरेन । जथाभावी मनोनयन गर्ने, यसको परम्परा थियो जुन यो संस्करणमा पनि दोहोरियो । यो अवार्डले जथाभावी मनोनयन गर्छ भन्ने सानो उदाहरण अघिल्लो सालको उत्कृष्ट केमियो विधाको नोमिनेसन हो । संसारको कुनै पनि ठाउँमा नहुने विधामा पोहोर साल डीसिने अवार्डले मनोनयन मात्र गरेन, सोही विधामा पुरस्कृत पनि गर्यो । एक गीतमा देखा परेका निश्चल बस्नेतले ‘लप्पन छप्पन’बाट यो पुरस्कार हात पारेका थिए । अनि आयोजक शान्तिप्रिय आफैं गीतकार रहेको गीतबाट गायक तथा संगीतकारले अवार्ड पाएका थिए । यो देखेपछि धेरैको टिप्पणी थियो, ‘यो त आफैंले आफूलाई अवार्ड दिए जस्तो भयो ।’ संसारका कुनै पनि प्रतिष्ठित अवार्ड आयोजकले आफू संलग्न चीजलाई अवार्ड दिनु त परैको कुरा, छेउछाउसम्म पनि पर्न दिँदैनन् । तर यहाँको आयोजकलाई जब यो कुरा भनिन्छ, खेदो खनेको आरोप लाग्छ । यो पालाको डीसिने अवार्डको मनोनयनमा पनि आयोजक र जुरीको मनोमानी यथावत छ । मनोनयनमा साँच्चिकै राम्रा भनिएका फिल्म पाखा छन् र बजारमा हल्ला खल्ला धेरै भएका फिल्मले मनोनयनमा स्थान पाएका छन् ।
सबैभन्दा पहिला उत्कृष्ट फिल्मको कुरा गरौं ।
डीसिने अवार्डको मनोनयनमा उत्कृष्ट फिल्ममा ‘ऐश्वर्य’, ‘छक्कापञ्जा २’ ‘मंगलम’ ‘लिलीबिली’ ‘कृ’ छन् । साँच्चि भन्ने हो भने उत्कृष्ट फिल्ममा परेका माथि उल्लेखित एकाधबाहेक सबै फिल्मले दर्शकबाट नराम्ररी गाली गाएका छन् । सुरेन्द्र पौडेल निर्देशित फिल्म ‘कृ’ सर्वाधिक १३ विधाको मनोनयनमा छ । तर यो त्यही फिल्म थियो जहाँ अनमोलको स्टारडमबाहेक केही कुरा पनि गतिलो थिएन । फिल्म उत्कृष्ट हुन्थ्यो भने फिल्म चल्थ्यो र फिल्म चलेको भए निर्माताको पैसा उठ्थ्यो । फिल्मको प्राविधिक पाटोमा खोट लगाउने ठाउँ नभए पनि फिल्मको कथा पटकथामा सबैभन्दा ज्यादा समस्या थियो तर कमजोर भएकै विधामा यो फिल्म मनोनयनमा छ । यही कथा ‘लिली बिली’को पनि छ । १० विधामा मनोनयनमा परेको फिल्म बजारमा दुई हप्ता पनि टिकेन तर फिल्म सबै मुख्य विधामा मनोनयनमा छ । थुप्रै घडान निर्देशकलाई पछि पार्दै एनएफडिसी अवार्डमा उत्कृष्ट निर्देशकको अवार्ड हात पारेका मिलन चाम्सले यहाँ पनि यो विधाको पुरस्कार पाए भने अचम्म नमान्दा हुन्छ । आयोजक र जुरीको ध्यान जसरी हुन्छ ज्यादाभन्दा ज्यादा अवार्ड बाँड्नमा केन्द्रित देखिन्छ । आयोजकले उत्कृष्ट फिल्मसँग मिल्दो जुल्दो गरी पपुलर चलचित्र विधा सिर्जना गरेका छन् । मोहन निरौला, राजेन्द्र उप्रेति, सन्तोष श्रेष्ठ, डब्बु क्षेत्री, सबनम मुखिया सम्मिलित जुरीलाई धेरैको प्रश्न छ, पपुलर विधाका फिल्म के चीजको कमीका कारण उत्कृष्ट भित्र परेनन् । ५१ दिनसम्म चलिरहेको ‘शत्रुगते’ के कमीका कारण जम्मा तीन विधामा मनोनयनमा छ अनि यो फिल्म कुन अवगुणका कारण उत्कृष्ट फिल्मभित्र अटाएन ?
निर्देशनको विधामा पनि यस्तै समस्या छ । ‘कृ’को कमजोर कडी नै निर्देशन मानिएको थियो तर यही विधामा सुरेन्द्र पौडेल मनोनयनमा छन् । यही अवस्था मिलन चाम्स र दिवाकर भट्टराईको पनि हो तर जुरीले उनीहरुलाई नै उत्कृष्ट ठहर्याएका छन् । पटकथा विधामा पनि जुरीको मनोमानी देखिन्छ । ‘कृ’ आशिष रेग्मी र प्रदिप भारद्धाज मिलेर लेखेका हुन् । फिल्ममा दुवैको नाम छ । तर मनोनयनमा प्रदिप गायब छन् । यो विधामा पनि पर्नु पर्ने नपरेको र नपर्नु पर्ने परेको स्पष्ट छ । ‘दुईं रुपैंया’ बलियो पटकथा कै कारण हिट भएको थियो तर मनोनयनमा छैन । ‘लिलीबिली’ ‘कृ’, ‘संरक्षण’ कमजोर पटकथा कै कारण अपेक्षित चलेका थिएनन् तर जुरीले यिनमै पटकथाका गुण देख्नु अचम्म छ ।
निश्चल बस्नेतले बिहीबार यही अवार्डलाई लक्ष्य गर्दै एउटा स्ट्याटस लेखेका थिए, ‘फिल्म अवार्ड नोमिनेसन, आर यु कमेडी मी ?’ आयोजकले यसलाई एउटा फिल्मकर्मीको मात्र असन्तुष्टिको रुपमा बुझ्नु ठूलो भूल हुनेछ । मान्छेलाई बोलाइ बोलाइ अवार्ड दिनुपर्ने अवार्ड आयोजकको बाध्यता यस्तै असन्तुष्टिको ‘इग्नोर’बाट सुरु भएको हो ।
अवार्डमा आयोजकको ‘संरक्षण’ फिल्मप्रतिको प्रेम पनि धेरैलाई बुझिनसक्नु छ । बक्स अफिसमा नराम्ररी चित खाएको फिल्म सर्वाधिक ११ विधामा मनोनयनमा छ । यसको मतलब बक्स अफिसमा नचल्ने फिल्म नराम्रो नै हुन्छ भन्ने हैन । तर ‘संरक्षण’को न लेखाइ राम्रो थियो न कुनै कलाकारको अभिनय । तर फिल्म थुप्रै विधामा मनोनयनमा पर्नुलाई धेरैले आयोजक शान्तिप्रिय र फिल्मका निर्माताद्धय प्रदिय उदय र नरेन्द्र महर्जनको निकटतासँग जोडेर हेर्ने गरेका छन् । यदि यो सत्य हो भने भोलि फिल्मले थुप्रै विधामा अवार्ड जित्यो भने अचम्म नमान्दा हुन्छ ।
कथा विधामा मनोनयनमा परेको फिल्म ‘आधा लभ’ स्पेनिस फिल्म ‘स्लिप टाइट’बाट उठाइएको छ । चोरेको कथा उत्कृष्ट हुने भए सर्जक किन मौलिकताको पछि लाग्नु ? बजारमै हल्ला भइसकेको कुरा जुरीले थाहा नपाउनुले जुरीकै क्षमतामा प्रश्न उठ्छ । जुरीकै यस्तै कमजोरी खलपात्र विधामा पनि देखिएको छ । सरोज खनाल ‘पन्चायत’बाट खलपात्रमा मनोनयनमा छन् । जबकि यो फिल्ममा उनको भूमिका नकारात्मक छैन । जुरीको विवेकले उनलाई जबर्जस्ती भिलेन बनाएर मनोनयनमा राखेको छ ।
बलिउड अभिनेता ऋषि कपुरले आफ्नो बायोग्राफी ‘खुल्लम खुल्ला’मा आफूले पैसा दिएर फिल्म फेयर अवार्ड किनेको घटनालाई सर्वाधिक पछुतो हुने घटनाको रुपमा उल्लेख गरेका छन् । अवार्ड लिने र दिने दुवैले कुनै दिन यस्तो पछुतो गर्नु नपरोस् । अवार्ड स्रष्टाको कदरका लागि हो तर धेरै अवार्डले पछिल्लो समय ‘क’लाई गायब गरेर ‘दर’लाई सक्रिय बनाएको आरोप छ । अवार्डको यही बेथिती देखेर खगेन्द्र लामिछाने र दीपकराज गिरीले घोषित बहिष्कार गरिसकेका छन् । यो अवस्था रहे भोलि यो लिस्टमा अरु पनि नाम थपिँदै जाने निश्चित छ ।
२९ बिधा र मनोनयनमा परेका उत्कृष्ट ५ निम्न अनुसार छन :
अच्यूत लामिछाने– राधे
अनुपम शाह– कान्छी
ग्लेज इन्टरटेन्टमेन्ट– कृ
एलिश कार्की– मंगलम
एलिश कार्की– लिलीबिली
रोहित शाक्य– घामपानी
उत्तम न्यौपाने– ऐश्वर्य
उत्तम न्यौपाने– कृ
सुनयमान श्रेष्ठ– संरक्षण
मिना निरौला– शत्रुगते – रुपै मोहनी
मेलीना राई – दुई रुपैया– कुटुमा कुटु
हिमाल केसी– पिजडा ब्याक अगेन
हिमाल केसी– रुद्र
हिमाल केसी– संरक्षण
केदार घिमिरे– छक्कापञ्जा २
राजाराम पौडेल– हुर्रे
राजाराम पौडेल– म यस्तो गीत गाउँछु
विजय बराल– हुर्रे
गोविन्द फुयाँल– मंगलम
नवराज बुढाथोकी– भूइमान्छे
प्रकाश आङ्देङवे– देश खोज्दै जाँदा
शिवम् अधिकारी– पंचायत
आशिष रेग्मी– कृ
गोविन्द फूयाल, नवल नेपाल– मंगलम
प्रदिप भारद्धाज– लिलीविली
दिपकराज गिरी– छक्कापञ्जा २
रमेश रञ्जन,पुर्णेन्द्र झा– संरक्षण
दिपक,केदार,जीतु,अभिमन्यू– छक्कापञ्जा २
सलिममान बानिया– ए मेरो हजुर २
स्वरुपपुरुष ढकाल– छक्का पञ्जा २
दिपेन्द्र लामा– घामपानी
शिशिर राणा– तिमीसँग
अशिश्मा नकर्मी– संरक्षण
मेनुका प्रधान– हिटलर
राजेश श्रेष्ठ, सुदिप बराल– ऐश्वर्य
साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह– ए मेरो हजुर २
पुष्पल खड्का – मंगलम
ए मेरो हजुर २ – झरना थापा, सुहाना इन्टरटेन्मेन्ट
कान्छी – आकाश अधिकारी, काया फिल्म्स
छक्का पञ्जा –दिपाश्री निरौला, आमासरस्वती मुभिज्
दुइ रुपैया – अशिम शाह, जि २१, ब्ल्याकहर्ष पिक्चर्स
शत्रु गते – प्रदिप भट्टराई, महसंचार
कृ – सुवास इन्टरटेन्मेन्ट, सुपर काजल फिल्म्स प्रा.लि.
मंगलम – छविराज प्रोडक्सन
लिलीबिली – चाम्स् इन्टरटेन्मेन्ट काफिया फिल्म्स